SlayerAI: Go'aaminta kelmado kala duwan oo badan oo aad u baahan tahay inaad ku guulaysato | Martech Zone
Talaado, Janaayo 18, 2022 Talaado, Janaayo 18, 2022 Douglas Karr
Celcelis ahaan, shan marar badan oo dadku akhriyaan cinwaanka sida akhri nuqulka jirka. Markaad cinwaankaaga qorto, waxaad ka bixisay siddeetan senti dollarkaaga.
David Ogilvy, Ogilvy oo ku saabsan Xayeysiinta
Slayer waa garaad macmal ahAI) wax soo saar saadaaliya sida uu cinwaan uga dhigi karo daawadayaasha la siiyay. Tusaale ahaan, waxay fahamsan tahay denimkaas dukes waa 15% ka sii mashquulin ka badan denim gaagaaban suuqa moodada. Gacan-ku-dhiiglehu wuxuu habeeyaa qoraalka ku salaysan halka uu nuqulku ka soo bixi doono, isagoo ku siinaya natiijooyin la jaan-qaaday si kor loogu qaado guusha dhagaystayaashaada. AI waxay u shaqeysaa iyada oo falanqaynaysa kumanaan ololeyaal iyo qoraallo hore ah, oo ay weheliso waxtarkooda. Ka dib waxaa loo tababaray in la aqoonsado in qoraalku soo jiidanayo iyo in kale.
Daraasadda Kiiska SlayerAI
Hal tusaale oo ah sida Slayer loo isticmaalo ayaa ahaa Kobcinta macaamiisha waxay taabataa 30% ee shirkadda amniga internetka oo si guud looga ganacsado, OneSpan. OneSpan waxay adeegsatay Slayer si ay u wanaajiso khadadka mawduuca iimaylka iyadoo la aqoonsanayo wax-soo-saarka ugu badan:
Waa maxay sababta SlayerAI muhiim u tahay?
3dii sano ee la soo dhaafay qadarka koobiga la sameeyay ayaa lahaa kor u kacay 10x.
Cabbirka Suuqa Abuuridda Mawduuca Dijital ah ee Caalamiga ah ayaa la filayaa inuu gaaro US $ 38.2 bilyan marka la gaaro 2030 at CAGR oo ah 12% inta lagu jiro 2020 iyo 2030. Sababo la xiriira imaanshaha xaqiiqada dhabta ah iyo sirdoonka macmal ah, aaladaha abuurista dhijitaalka ah ayaa marqaati ka ah koror degdeg ah baahida inta lagu jiro xilliga saadaasha.
InsightSLICE, Suuqa Abuurista Mawduuca Dijital ah
Kobacani waxaa horseeday dhowr arrimood - isbeddelka sii kordhaya ee ganacsiga internetka, kordhinta isticmaalayaasha cusub ee internetka soo galaya markii ugu horeysay, iyo awoodda lagu abuuro nuqul leh AI.
Waxaa jira karti iyo qalab ka badan sidii hore oo lagu abuuri lahaa nuxur, iyo u wareegidda ganacsiga internetka ayaa sare u qaadaya baahida nuqulka… oo kaliya way sii weynaanaysaa
SlayerAI waxay ku siinaysaa awood aad kula falgasho dhagaystayaashaada bad ka kooban raqiis ah. Tani, isgaadhsiinta weyn waxay noqotaa awood sare. Si aad ula soo baxdo nuqulkaaga, waxay qaadanaysaa wax ka badan in la hubiyo inaad leedahay naxwaha iyo higaada saxda ah, ama raacitaanka dhaqamada suuqgeyneed ee ugu fiican, sababtoo ah dhamaadka ciyaarta waxay ku saabsan tahay inaad awood u yeelatid inaad la kulanto dhagaystayaashaada meelahooda.
Waqtigan xaadirka ah, dhibaatada isgaarsiinta liidata waxaa lagu xalliyaa faragelinta gacanta (tusaale, tifaftiraha aadanaha) iyo adeegsiga aaladaha softiweerka qaarkood oo ku siin doona heshiisyo guud (Naxwaha oo ah kan ugu caansan). Iyadoo tifaftirayaasha bini'aadanku ay noqon karaan kuwo aad u fiican oo gaar ah, helitaanka nuqul-qoraal gaar ah waxay noqon kartaa qaali oo waxaa jira kaliya shaqo badan oo ay qaban karaan.
SlayerAI waa kaaliyaha ugu habboon, gaar ahaan marka ujeedadu tahay in ololaha suuqgeyntu si fiican u qabtaan, si joogto ah.
Yaa ugu fiican SlayerAI?
SlayerAI waa qalab cajiib ah qof kasta oo wax ku qoraya nuqul online ah. Hadda, isticmaalayaasha Slayer waxaa ka mid ah ganacsiyo waaweyn, ganacsiyo yaryar, wakaaladaha suuq-geynta, iyo nuqul-qorayaasha madaxa-bannaan ee gaarka ah.
AI waa u xor in la isticmaalo wakhti xaddidan, waxayna isla markaaba kaa caawin kartaa hagaajinta waxa ku jira, marka lagu daro:
Ku samaynta toddobaadyada tijaabada A/B daqiiqado halkii aad ka samayn lahayd bilo
Hubinta higgaadda saamaynta, beddelka naxwaha
Xakamaynta tayada degdega ah ee nuqul-qorayaasha yaryar
Furaha qorista nuqul wanaagsan waa in la go'aamiyo waxa dhagaystayaashaadu rabaan marka hore, ka dibna lagu daro astaantaada. Taasi waa sababta Slayer u abuuray awoodda lagu dooran karo daraasiin dhagaystayaal bartilmaameed ah; laga bilaabo dadka xiiseeya crypto, ilaa kuwa xiisaynaya moodada, quruxda, jimicsiga, baabuurta, dib u cusboonaysiinta guriga iyo in ka badan.
AI-keena waxaa si weyn loogu tijaabiyay koox yar oo isticmaaleysa beta, natiijaduna waxay ahaayeen kuwo aan caadi ahayn. Haddii ay caawinaysay bilawga Kordhi qiimaha furan 12% ilaa 19%, ama ka caawinta wakaalada suuq geynta inay koraan adoo u oggolaanaya inay waqti yar ku qaataan hubinta shaqadooda.
Ma doonaysaa inaad qorto cinwaannada degelka ee ka wanaagsan, khadadka mawduucyada, cinwaannada blog-ka, koobiga xayaysiiska, qoraallada bulshada iyo SMS? Slayer ayaa kaa daboolay dhammaan dhinacyada.
Sidee ayuu SlayerAI u shaqeeyaa?
Isticmaalka Slayer waa sahlan tahay, kaliya iska diiwaangeli akoon bilaash ah, gal, ka dibna:
Dooro dhagaystayaasha aad beegsanayso
Geli nuqulka aad rabto inaad dhaliso, oo dooro haddii aad rabto talo soo jeedin
Waa kaas! Haddii aadan arkin dhagaystayaashaada ugu fiican, markaas waxaad naga codsan kartaa mid cusub adoo isticmaalaya hoos u dhaca dhanka bidix ee shabakada.
Dhibcaha aad aragto waa boqolkiiba fursadda qoraalkaagu u leeyahay inuu noqdo mid si heersare ah u soo jiidasho leh. AI waa 80% + sax ah, taas oo macnaheedu yahay in ciwaannadaada ay hadda u qaban doonaan indhaha akhristayaashaada qaaliga ah marar badan.
Maxaa dhacaya markaad fayras gasho?
Siinta badeecadaada ama adeegaaga fursada ugu wanaagsan ee fayrasku waxay si weyn u bedeli kartaa hantida shirkaddaada. Waa faraqa u dhexeeya sannadka iibka rikoodhka iyo ilaalinta xaaladda hadda jirta.
Fursadahaaga ugu wanaagsan ee kobaca iyo fayraska ayaa isticmaalaya SlayerAI si loo hubiyo inaad ka faa'iidaysato dadaalkaaga suuqgeynta. Isdiiwaangeli hadda oo hel 2 toddobaad oo SlayerAI ah oo bilaash ah!
Isdiiwaangeli tijaabada SlayerAI
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyeyaashayda Amazon iyo SlayerAI ee maqaalkani.
Tags: koobiga xayeysiiskaaiheerka-riixContent Suuqkobcinta waxyaabahactrku soo dir email qiimayaasha furanhagaajinta khadka mawduuca emailkahagaajinta cinwaankacinwaanadakordhi ad ctrKordhi qiimahakordhi emailka qiimaha furankordhinta sicirka furanwanaajinta cinwaannadagacan ku dhiiglehagaajinta khadka mawduuca